Ithuba Elihlukile, Thola Umsebenzi eDisney Cruises | Izikebhe ze-Absolut
Ithuba elihlukile, thola umsebenzi kwiDisney Cruises
UMaria Jose Roldan | | Ukuhamba ngesikebhe okunethezeka, I-Disney Cruise Line
Wonke umuntu uyazi uphawu lweDisney nakho konke okubandakanya uphawu. Imidwebo, amathoyizi, amapaki wetimu ... kanye nohambo lokuhamba. IDisney wayengeyena nje kuphela umdali wamakhathuni kepha kwakuyizingcezu zokuqala zombuso omkhulu lapho izingane nabantu abadala abavela kuwo wonke umhlaba bathanda ukujabulela. IDisney Cruises iyisibonelo sokuthi izinto ezinkulu zingafinyelelwa kanjani ngomzamo wabantu abaningi: abasebenzi.
1 Joyina abasebenzi baseDisney Cruises
2 Ukwehluka kwamasiko
3 Intuthuko eqhubekayo
4 Ngabe konke kuhle kangaka?
Joyina abasebenzi baseDisney Cruises
Isungulwe ngo-1998, ulayini weDisney Cruise waziwa ngokunikela ngezinsizakalo ezehlukile nokwakha okuhlangenwe nakho okungalibaleki kwemindeni ezohlala impilo yonke. Kepha ukufeza lokhu, kuyadingeka ukuthi abasebenzi babe ngochwepheshe nokuthi bangasebenza ngentshiseko nangokulangazelela ukwenza ukuthi izingane nabantu abadala babe nesikhathi esihle.
Abasebenzi banikeza ukunakekelwa komuntu siqu kuwo wonke amaklayenti futhi lokhu kwenza umehluko ngezinye izikebhe ezinetimu. Bafuna ukwenza abantu bazizwe bekhethekile kusuka lapho bengena ebhodini futhi yingakho kubonakala sengathi abantu bayasiphinda isipiliyoni. Ukusebenza emkhunjini wesikebhe kudinga ukuzinikela okukhulu futhi wazi ukuthi kuzoba nezikhathi zokusebenza kanzima, kepha ngaphezu kwalokho izophinde inikeze okuhlangenwe nakho okuzuzisayo, umholo wokuncintisana noqeqesho lokuthuthukisa ngokomsebenzi. Ukusebenza eDisney Cruises kunje: ukusebenza kanzima nokuzuzisa.
Kunabantu abaningi abanezizwe ezahlukahlukene kubasebenzi bezikebhe futhi kudingeka umzamo omkhulu weqembu ukuhlanganisa umsebenzi kahle. Amathalente ahlukene, amakhono namakhono ayaziswa emsebenzini weDisney Cruises kungakhathalekile ubuzwe babantu.
Okufunwayo ukubumbana kwethimba, ukuqinisekisa ukuthi amalungu ezisebenzi kanye nezikhulu bayazi ukuthi bangahlalisana kanjani kanye namakhasimende. Yindlela kuphela yokwenza izivakashi zizizwe zibalulekile ngokulindela izidingo zazo ... kufanele unake iklayenti ngaso sonke isikhathi ukuze lizizwe lihle.
Ngalesi sizathu, inkampani izibophezele ekuqinisekiseni ukuthi abasebenzi bayakwazi ukufeza izindinganiso eziphakeme ngokuba namaqembu ahlukahlukene agxile kokuhlangenwe nakho kwabasebenzi, anikeze ukuqashelwa kwangaphakathi nokusekelwa ngabantu. Umsebenzi osemabhodini ungaba nzima kakhulu futhi yingakho bezama ukwenza abasebenzi bazizwe bavuzwa njalo lapho behlangabezana nezinhloso zabo. Yini enye, lapho usebenza emkhunjini ohamba ngezikebhe, udala ubungane namanye amalungu eqembu Futhi sizama ukudala indawo yokusebenza engajwayelekile ukuze nsuku zonke ku-Disney Cruise kungakholeki, hhayi izivakashi kuphela.
Enkampanini yeDisney Cruise line banikela ngoqeqesho oludingekayo ukuze bakwazi ukuba nempumelelo yabo emsebenzini abanawo ngaso sonke isikhathi. Lokhu kungenxa yokuthi bafuna ukugcina izindinganiso zeDisney futhi banikeze ngamakhasimende ahlukile. Uma ufuna ukujoyina iqembu, kuzofanele ubambe iqhaza ezinhlelweni ezahlukahlukene zokuqeqesha namathuba entuthuko yakho. Ungaqala ngamasiko aqondiswe ku-Disney kusukela ngosuku lokuqala.
Njengoba uqeqesha uzokwazi ukwandisa ulwazi lwakho futhi uzozizwa ukulungele kangcono ukwamukela isiko elisemkhunjini futhi uzokwazi ukuthi kusho ukuthini ukuba yingxenye yomsebenzi weDisney Cruise. Inhloso yakhe ukuthi uzizwe uyingxenye yomndeni omkhulu.
Uhlelo lokuzula lenkampani luyindlela eyodwa yokukusiza uphumelele kanye nale nkampani. Ngalesi sizathu, banezinhlelo zokukhuthaza impumelelo yabantu nokuthi abasebenzi nabo bezwe ukubonga kwabaphathi babo, ngenxa yalesi sizathu, babanikeza amathuba ayingqayizivele, kufaka phakathi ukukwazi ukukhuthaza nokuthola ulwazi kwezinye izindawo zomsebenzi ngaphakathi inkampani efanayo. Uzokwazi ukufunda ngqo kubaholi beDisney futhi ukhule ube ngumholi futhi. Enkampanini bafuna ukhule, futhi ukwenze nabo, ukuze ube nguchwepheshe omkhulu.
Uma uthatha isinqumo sokujoyina ithimba leDisney Cruises, uzokwazi ukuthola izinhloso ezizungeze izihambi nezinsizakalo ezidumile zikaDisney. Kungakho ungathola intuthuko kulezi zindawo ezilandelayo:
Ukuqeqeshelwa ukukhula enkampanini. Uzokwazi ukufunda ngamasiko namagugu wemigqa ye-Disney Cruise, uthole izinhloso zokungenisa izihambi nokusebenza.
Ukuqeqeshwa kobuchwepheshe. Uzokwazi ukuthola ukuqeqeshwa okudingekayo kwizikebhe zamazwe omhlaba.
Umsebenzi. Bazokulungiselela ukuthi ujwayelane nomsebenzi wakho, ngazo zonke izinsizakusebenza ezidingekayo nezitholakalayo ukuze ukwazi ukwenza umsebenzi osezingeni
Ukuqeqeshwa kwezempilo nokuphepha. Kuyadingeka ukuthi abasebenzi bathole ulwazi ngezempilo nokuphepha ukuze iqembu lonke lazi ukuthi kufanele lisabele kanjani kunoma yisiphi isimo.
Ukuqeqeshwa kobuholi. Ngaphezu kwalokho, ungafunda ngefilosofi yenkampani ecace bha: thola amakhono obuholi ukuze uthuthukise ukukhula kwakho kanye nekusasa lakho lobuchwepheshe.
Ngabe konke kuhle kangaka?
Ukusebenza kwiDisney Cruises kungaba yinto enhle uma unalo ngempela ubizo lokusebenza emkhunjini wesikebhe. Yize kungabonakala njengomsebenzi wonyaka othile, iqiniso ukuthi uma ufuna ukuziqeqesha kulokhu, uzoba nethuba elihle lokukhula komuntu siqu kanye nobuchwepheshe.
Uma ususebenze ebhodini, kuzoncika kuwe nasemibonweni yakho ukuthi ungawujabulela umsebenzi obona ukuthi ungaphezu kwamandla akho. Kufanele wazi ukuthi uma usebenza esikebheni, uzoba semkhunjini amahora angama-24, noma ngezinsuku zakho zokuphumula. Kuzoba nezinsuku lapho kuyodingeka usebenze ngisho namahora ayi-12 ngosuku futhi ngeke ube nemfihlo ephelele ngoba kuzodingeka uhlanganyele igumbi lakho nabanye abasebenzi ababili noma abathathu.
Sebenza emikhunjini yokuhamba ngesikebhe
Ukusebenza emkhunjini ohamba ngesikebhe akuhlali kumnandi ngaso sonke isikhathi futhi kuzofanele uhambisane nemithetho nemikhawulo eminingi ukwenza umsebenzi wakho wenziwe kahle. Njengokungathi lokho bekunganele, kufanele uvumelane kahle nezinguquko, izimfuno, ingcindezi nokungababoni obathandayo isikhathi eside ngenkathi usebenza ebhodini. Uma konke lokhu kuzwakala kukuhle kuwe, ungaphuthelwa yithuba lokubona imisebenzi oyinikezwayo njengamanje ngalesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izikebhe ze-Absolut » Izinhlobo zokuhamba ngesikebhe » Ukuhamba ngesikebhe okunethezeka » Ithuba elihlukile, thola umsebenzi kwiDisney Cruises
I-themed cruise: i-zombie iyabonakala (e-Ibiza)
INaples, amadolobha amakhulu aseSpain emadolobheni ase-Italy